उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका पाँच ओटा कम्पनीकै शेयरमूल्य बढ्यो, बोटलर्स नेपालको सबैभन्दा बढी
मंसिर ४, काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा १९ ओटा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरु सूचीकृत भएपनि नियमित कारोबार पाँच कम्पनीको मात्र हुने गरेको छ ।
कात्तिक महीनामा बोटलर्स नेपाल (तराई), हिमालयन डिष्टिलरी, नेपाल ल्यूब आयल, शिवम् सिमेण्ट्स र युनिलिभर नेपालको नियमित कारोबार भएको छ । यी कम्पनीहरुको शेयरमूल्य असोज महीनाको भन्दा बढेको छ ।
यो महीना पाँच ओटा कम्पनीहरुमध्ये बोटलर्स नेपाल (तराई)को शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा प्रतिकित्ता रू. ६ हजार ५०० रहेको बोटलर्स नेपाल (तराई)को शेयरमूल्य कात्तिक मसान्तसम्म रू. ७ हजार ६७९ पुगेको छ ।
बोटलर्स नेपाल (तराई)को शेयरमूल्य १ महीनामा रू. १ हजार १७९ ले बढेको हो । बोटलर्स नेपाल (तराई)ले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मुनाफाबाट ४० प्रतिशत नगद लांभांश दिएको थियो । यस कम्पनीले हालसम्म नगदमा मात्र जोड दिंदै आएको छ ।
कात्तिक महीनामा युनिलिभर नेपालको शेयरमूल्य पनि प्रतिकित्ता रू. ९९९ ले बढेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष प्रतिफल घटेपनि कम्पनीको शेयर खरीदमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण भने बढेको छ । असोज मसान्तसम्म प्रतिकित्ता रू. १७ हजार ५०१ रहेको युनिलिभर नेपालको शेयरमूल्य कात्तिक मसान्तमा रू. १८ हजार ५०० पुगेको हो ।
गत वर्ष प्रतिकित्ता रू. ७७० नगद लाभांश दिएको युनिलिभर नेपालले यस वर्ष प्रतिकित्ता रू. १०० का दरले लाभांश दिने भएको हो ।
त्यस्तै, कात्तिक महीनामा हिमालयन डिष्टिलरीको शेयरमूल्य पनि प्रतिकित्ता रू. ६१२ ले बढेको छ । असोज मसान्तसम्म रू. १ हजार ८०८ रहेको हिमालयन डिष्टिलरीको शेयरमूल्य कात्तिक मसान्तसम्म रू. २ हजार ४२० पुगेको हो ।
गत वर्ष १०२ दशमलव ६३ प्रतिशत लाभांश दिएको यस कम्पनीले हालसम्म यस वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । कम्पनीले यो वर्ष पनि आकर्षक लाभांश दिनेमा लगानीकर्ताहरु विश्वस्त रहेको देखिन्छ । कात्तिक महीनामा नेपाल ल्यूब आयल र शिवम् सिमेण्ट्सको शेयरमूल्य पनि बढेको छ ।
शिमव् सिमेण्ट्सको प्रतिकित्ता रू. ७४ ले र नेपाल ल्यूब आयलको प्रतिकित्ता रू. २८ ले शेयरमूल्य वृद्धि भएको हो । नेपाल ल्यूब आयलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि १० प्रतिशत नगद लाभांश र शिवम् सिमेण्ट्सले २४ दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् ।
उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरुको मूल्य वृद्धिको स्थिति :